Ao anatin'ny toe-javatra mampiady saina, toy ny mandritra ny vanim-potoana mafana tsy mahazatra na aorian'ny oram-baratra mahery vaika, ny haran-dranomasina dia mety ho mora voan'ny aretina sy loharanon-karena hafa mety maty. Amin'ny toe-javatra sasany, ny famerana ny hetsika na ny fanakatonana ny faritry ny haran-dranomasina dia mety ho paik'ady lehibe ho an'ny mpitantana mba hanamaivanana ny fiantraika amin'ny vatohara mandritra ny fiakaran'ny adin-tsaina ara-tontolo iainana vetivety na mandritra ny fotoana fanarenana.
Ny fandrahonana izay mety ho ifantohan'ny ezaka fitantanana fanampiny mandritra ny fotoan'ny adin'ny haran-dranomasina dia ahitana:
Raha misy ny fitsipika mety, dia afaka manangana fanakatonana vonjimaika na faritra voahilika ny mpitantana raha mino izy ireo fa hanatsara ny vokatra ho an'ny vato harana izany. Na izany aza, misy ny fiheverana lehibe rehefa mieritreritra ny fanakatonana ny tranokala. Tokony ho fantatry ny mpitantana ny mety ho fiatraikany amin'ny orinasam-pizahantany sy ny vondrom-piarahamonina mpanjono, ary koa ny fiantraikan'ny fifandraisana amin'ireo mpandray anjara. Ny fiantraika ara-tsosialy dia azo ahena ary ampitomboina ny fanarahan-dalàna amin'ny alalan'ny paik'ady fifaneraserana mikendry ny hanampy ireo mpandray anjara hahatakatra ny zava-misy sy handray anjara amin'ny famolavolana valin-kafatra momba ny fitantanana.
Nandritra ny hetsika fanasan-damba tamin'ny taona 2013, dia natao tany amin'ny toerana maro tany Malezia, Thailand, ary Indonezia ny atrikasa fianarana ny mpandray anjara. fantaro ny mety ho hetsika fitantanana mandritra ny hetsika bleaching. Credit: James Tan Chun Hong
Fiarovana ny Herbivores mandritra ny dingana fanarenana
Ny haran-dranomasina salama dia azo inoana kokoa fa afaka miverina amin'ny trangan-javatra mahery vaika (toy ny fisehoan-javatra fanalefahana izay miteraka fahafatesana faobe, na tafiotra mahery). Na izany aza, mety hihena be ny fizotran'ny fanarenana raha toa ka mihena ny dingana lehibe, toy ny herbivory.
Ny fandrarana vonjimaika amin'ny fanangonana herbivora any amin'ny toerana misy ny haran-dranomasina izay niharan'ny fiatraikany dia afaka manampy amin'ny fanarenana ny haran-dranomasina ary mety heverin'ny mpitantana ho anisan'ny paikady fanampiana amin'ny fanarenana. Na izany aza, mety mila apetraka mandritra ny taona maromaro ny fandrarana, fara faharatsiny mandra-pahatongan'ny vatohara simba amin'ny dingana voalohany amin'ny fanarenana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanakatonana ara-potoana toy ny fitantanana ny haran-dranomasina adaptive any amin'ny Indo-Pasifika